गरीबको दसैं टार्ने त्यो कपडा बैंक « हातमा खबर-जहाँ तपाइँ, त्यहीं खबर
गरीबको दसैं टार्ने त्यो कपडा बैंक
प्रकाशित मिति : २०७६, ८ आश्विन बुधबार २२:००
काठमाडौंको अनामनगरस्थित बिराटनगर निमावासी राजेन्द्र साह र उनकी छोरी बिमला साह झोला भरी पुराना लुगाहरु लिरहेका छन । पुराना लुगालाई नयाँ लुगा जस्तै सम्झेर आफ्नो शरीरमा नाप्दै आहा क्या दामी भन्दै टिपिएरहेका देखिन्छन् । बाउछोरी एक आपसमा कुरा गर्दै यो कुर्ता आमालाई र टोपी सानो भाइलाई राम्रो सोहाउछ है बुवा भन्दै झोलाभरी दशैको लागि लुगा लिइरहेका छन् ।
साँच्चै यो राजधानी सहरमा राजधानी जस्तै ठुला मन र सुन्दर मान्छेहरु रहेका छन् । दशैंको लागि सेकेण्डह्याण्ड लुगा बटुलीरहेको साहले बताए । किनभने यही लुगाले यस्तो महंगो समयमा उनी दशैंमा चाहिने नयाँ नानाको गर्जो टारिरहेका छन् ।
हामी जस्ता कम आय भएका मान्छेहरुको लागि यस्ता कपडा बैंकहरु ठूलो राहत भएको उनले बताए । हो, बजारमा किनमेलमा व्यस्त हुनेहरुको चटारो हेर्दा टंक बुढाथोकी र असोक दर्जीको चर्चित गीत “मन बिनाको धन ठुलो कि धनबिनाको मन“ जस्तै नियतिमा मान्छेहरु रहेको अनुभती हुन्छ ।
धन हुनेका लागि दशै हो, धन नहुनेहरुका लागि पनि मन त छ नै । त्यसैले मन हुनेहरु पनि जसो तसो दशैंको मेलोमा तयारीमा नै देखिन्छन । क्यालेण्डरमा हेर्दै अफिस वा आआफ्ना कार्यकक्षमा दशै चर्चा गर्नेदेखि बसपार्क परिसरमा झिसमिसे देखि नै टिकट काट्नेहरुको लामो लामो लर्को र भीडभाड बढेको पनि साता बढी भैसक्यो । राजधानीबाट बाहिरिनेहरुले टिकट बुक गरेर आफ्नो घरको यात्रा सोझ्याउन भ्याई नभ्याई नै देखिन्छ ।
वास्तवमा नै नेपालीहरुको महान चाड वडादशै अब केही दिनको मात्रै प्रतिक्षामा कुरीरहेको अवस्था छ । यो चाड नेपालीहरुका लागि एकदमै महँगो चाड हो । यो चाडमा टोपीदेखि जुतासम्म र चामलदेखि खसिको मासुसम्म ऋण गरेर भए पनि जुटाउनै पर्ने दबाब हुन्छ ।
त्यहि भएर होला यो चाडको बारेमा सदियौंदेखि बिभिन्न किंवदन्ती चल्दै आएका छन । दशैंबारेका विभिन्न भनाई मध्ये गरिब मानिसको हातको पाँच औलालाई मानिसका पाँच भाईको संज्ञा दिईएको कथा जस्तै बन्छ दशैं ।दशैको बेला पाँच भाईहरुले आअफ्नै शैलीमा विचार यसरी राखेका हुन्छन् । सबभन्दा कान्छो औलाले रमाईलो पारामा भन्छ, दशै आयो । माहिलोले भन्छ के भो त ? खाउलापिउला ।
दुइ भाइले यति भनीसकेपछि साइलोलाई चिन्ता लाग्छ अनि मनमनै भन्छ, यो दशै हैन दशा हो । ईस्वर अमात्यले गाएको गीत मनमनै सम्झिदै अनि भन्छ ल ! घरमा केही छैन । भाईहरुलाई प्रश्न गर्छ कहाँबाट ल्याउला ? प्रश्नको जवाफमा काईलोले नडराइकन भन्छ, चोरीबाट ल्याउला । अनि त्यति सुनीसकेपछि जेठालाई पीर पर्छ । अब त यिनीहरु मेरो इज्जत पानीमा डुवाउने भए । अनि रिसले भन्छ, धत पापी तिमीहरुदेखि म छुट्टै बसौला ।
यो भनाई प्रत्येक मान्छेको दशैको बेला मुखमुखबाट बोलेको सुनिन्छ । तर धनीले बोले पनि गरिबले चाहि यो भनाई ब्यवहारमा नै मुश्किलले भोगेका पाइन्छन । यस्तै एउटा गरिब मान्छेले पनि ब्यवहारमा नै भोगेको देखिन्छ । दशैको चटारोमा बिशेष गरी राजधानीको प्रमुख बजारहरुमा लुगा किन्नेका ताँती लागेको छ ।धन अर्थात आर्थिक आम्दानी वा क्रयशक्तिका हिसाबले फरक फरक स्तरको भए पनि सेलेवेरेशनको हिसाबले दशै सबैका लागि समान छ उही धन बिनाको मन ठूलो की मन बिनाको धन भन्ने गीती भाकाको शव्द जस्तै ।
सबैले खास्सा नेपाली भएर सोच्नु पर्दा जो छन गरिब पनि हाम्रै दाजुभाई हुन । धनी पनि हाम्रै दाजुभाई हुन । दशैको चटारो पनि महंगीको हात्ति चढेर सवार हुनु चाहि सबैका लागि चिन्ताको विषय हो । अझ वर्षात मौसममा आएको प्राकृतिक बिपत्ति परेर बौरिएकाहरुका लागि त यो दशैं अझै बढी भारी परीरहेको देखिन्छ ।
बाढीपिडित र गरिबले धनीको पुराना लुगाको महत्व बढाएका छन् ।यो लुगाको कुरा गरिरहदा धनीका लागि बैंक भन्ने बितिकै पैसा जम्मा गर्ने र निकाल्ने कुरा बुझिन्छ । तर बाढीपिडित र गरिबहरुका लागि पैसाको हैन कपडा बैंक राजधानी लगायत देशका बिभिन्न ठाउँहरुमा खोलिएका छन् । त्यसैगरि काठमाडौंको अनामनगरमा लुगा बैंक संचालन गर्दै आएका छन् ।
१०० गु्रप र बिर बहादर बिष्ट मिलेर खोलिएको हो । धेरै गरिब र वाढीपिडित जनता यो लुगा वैंकबाट लाभान्वित भएको सर्लाही निवासी रामनरेश महराले उज्यालो नेपाल डटकमलाई जानकारी दिए । यस्तो बैंक देशको बिभिन्न स्थानमा संचालन हुदै आएका उनले बताए । यो कपडा बैंकमा दुईथरिका मान्छे आउछन । एक थरि बाढीपिडित र गरिब मान्छेहरु आउछन् भने अर्को थरि कपडाको बिजनेश गर्ने मान्छे आउछन् महराले अनुभव सुनाए ।
यहाँ टोपीदेखि जुतासम्म र झोलाहरु तथा बाटो हिडने वटुवाका लागि निशुल्क पानीको पनि ब्यवस्था छ । प्रत्येक्षदर्शी केदार अधिकारी र नविन कुमार सिंहले बताए ।
यो कपडा बैँकमा आफ्नो पुराना कपडाहरु धोएर जम्मा गर्न सकिन्छ । आफू पनि बाच र अरुलाइ पनि बचाउको भावनाले सबैलाई सतमार्ग मिल्छ भन्ने बिचार संचालक महराको छ । यी पुराना लुगा कसैलाई नायाँ भएर जीवन निर्वाह गर्ने बाटो हुनसक्छ । त्यसैले यो लुगा तपाईलाई मानमर्यादा दिन सक्छ । लुगादान महादन जय नेपाल ।